Turkiga Iyo Dalalka Carabta Oo Cambaareeyay Qorsho ka Dhan ah Falstiin Oo Uu ku Dhawaaqay Netanyahu. – Heemaal News Network
Dalalka Carbeed ayaa cambaareeyay qorsha uu Ra’iisulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ku doonayo in uu dalkiisa ku daro qayb ka mid ah Daanta Galbeed ee la haysto.
Ra’iisulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa talaadadii wacad ku maray in uu dalkiisa ku dari doono qayb ka mid ah dhulka la haysto ee Daanta Galbeed, haddii uu dib ugu soo laabto xafiiska ka dib doorashada guud ee la qabanayo toddobaadka soo socda..
Dhawaaqa Netanyahu ayaa waxa si adag u canbareeyay Masuuliyiinta dalalka Urdun, Turkiga iyo Sacuudi Carabiya iyo Jaamacadda Carabta waxayna tallaabadan halista ah ee soo korodhay ku tilmaameen weerar gardarro.
Saeb Erekat oo ah dublamaasi Falastiini ah ayaa sheegay in tallaabadaasi ay noqon karto “dambi dagaal” ayna “aasi karto jaanis kaste oo nabad lagu gaari kartay”.
Israa’iil ayaa haysata Daanta Galbeed tan iyo 1967, balse way ka gaabsatay in ay ku dhawaaqdo in ay dhulkeeda ka mid tahay.
Falastiiniyiinta ayaa sheegta in dhammaan dhulkaasi uu yahay dhulka xukuumadda ay mustaqbalka yeelan doonaan, balse Netanyahu ayaa horay ugu adkaysan jiray in Israa’iil ay arrimo ammaan awgood waligeed u joogi doonto Dooxada Urdun.
Xildhibaan Si Adag U Naqdiyay Heshiiska Dhex-maray Mulkiilayaasha Wadani Iyo Ucid.